Kuqagulwa inhlupheko enkulu ezayo kuleli - Ilanga News
Home Izindaba Kuqagulwa inhlupheko enkulu ezayo kuleli
Kuqagulwa inhlupheko enkulu ezayo kuleli
ONGOTI bathi noma iyiphi indlela uhulumeni ayikhethayo, izokwethwesa abampofu ubunzima ngesikhathi kwenziwa
imizamo yokufukula umnotho.
UMA iNingizimu Afrika iqeda nje ukunqoba igciwane leCorona izobhekana nomsebenzi onzima wokufukula umnotho.
Kuzokhumbuleka ukuthi lihlasela nje leli gciwane, umnotho waleli zwe ubusuneminyaka untenga.
Ukuze yehlise izinga lokwenyuka kwabantu abahlaselwa yileli gciwane iNingizimu Afrika, ilandele isibonelo samazwe apheshe-ya sokuphoqa ingxenye enkulu yezakhamizi ukuba zihlale ema-khaya izinsuku eziwu-21.
Ithe ingena ngaphansi kwalolu hlelo lokuhlala emakhaya iNingizimu Afrika, yathola isibhaxu sivela enkampanini yakwaMoody’s.
Le nkampani imemezele ukuthi yehlise izinga lapho ibibheke khona isimo sezimali zikahulumeni wakuleli, lokhu okuthiwa i-downgrade.
Lokhu kusho ukuthi izokwenyuka inzalo uhulumeni azoyikhokha uma eboleka imali. Isinqumo se-Moody’s siqhamuka uhulumeni wakuleli esevele ecindezelwe yizikweletu nokwanda kwezinka-mpani zakhe ezidinga uxhaso.
Ngakhoke umphumela wesinqumo seMoody’s sokwenyusa inzalo ekhokhwa wuhulumeni uma eboleka imali, sizokwenza nzima imizamo kahulumeni yokufukula umnotho.
Ohulumeni bamazwe asethuthukile bona banamandla okweboleka izindodla zemali zokuxhasa izinkampani nokunxephezela izisebenzi ezilahlekelwa yimiholo ngenxa yokuphoqwa ukuba zihlale emakhaya.
Labo hulumeni bazokwazi nokuxhasa iminotho yabo noma isinqo-tshiwe iCorona.
Uhulumeni wakuleli akanawo lawo mandla, futhi uzothwala kanzima uma eboleka imali engadingeka ukufukula umnotho emuva kokuphela kweCorona.
Isinyathelo sokuhlalisa abantu emakhaya sithathwe ngoba ukuhlangana kwabantu yikhona okwandisa leli gciwane. Izindawo zemisebenzi, ezentilasipoti (ikakhulukazi amabhanoyi) nokuhlangana kwabantu ezindaweni zokungcebeleka kwandisa amathuba okusabalala kwaleli gciwane.
Kodwa umthelela wokuhlalisa abantu emakhaya kusho ukuma kokusebenza kwemikhakha eminingi yomnotho wakuleli.
Imigomo ebekwe wuhulumeni ngalezi zinsuku eziwu-21, ivumela kuphela amabhizinisi aphathelene nokukhiqizwa nokuthengiswa kokudla, yizindawo ezithengisa imishanguzo (amakhemisi), odokotela, izibhedlela nezinye izikhungo zempilo ukuthi kube yizo ezivuliwe. Amasosha nabaphatha amasongo kaSigonyela nabo bavunye-lwe ukusebenza.
Lokhu kumiswa kokusebenza kwengxenye enkulu yomnotho wakuleli kuzokwandisa umthwalo onzima wokuzama ukuwufukula emuva kokunqoba igciwane.
Noma uhulumeni esememezele usizo oluzonikwa osomabhizinisi ukuze bakwazi ukumelana nemiphumela yokuphoqwa ukuba bavale, kuzothatha isikhathi eside ukuthi usizo lufinyelele kuwo wonke amabhizinisi aludingayo.
Omunye wemigomo obekiwe uzokwenza kube nzima nokho kwabaningi osomabhizinisi ukuthola lolu sizo. Lo mgomo uthi izinkampani kumele ziveze ubufakazi bokuthi ubunzima ezibuthwele budalwe wukuphoqa ukuthi zivale izinsuku eziwu-21. Maningi ama-bhizinisi aphoqeleke ukuvala izinsuku eziwu-21 esevele entenga ngenxa yesimo somnotho wezwe osekuneminyaka singesihle.
Kuzokhumbuleka futhi ukuthi ukuntenga kwebhizinisi akudalwa kuphela yisimo somnotho. Zingaba ziningi izizathu.
Phakathi kwazo singabala ukushintsha kwendlela uhlobo lwezimboni inkampani esebenza ngaphansi kwayo, ukuvulwa kwezinye izinkampani kwamanye amazwe ezikhiqiza ngenani eliphansi nezinqumo zabaphathi benkampani ezitholakala emuva kwesikhathi ukuthi zabe ziyiphutha.
Kakukacacike nokho ukuthi uhulumeni uzohlukanisa kanjani ukuthi yisimo seCorona esibeke inkampani ebunzimeni.
Okusemqoka futhi wukuthi lokhu kucubungula kuyothatha isikhathi esingakanani.
Uma kuthatha isikhathi eside, usizo lungafika ezinye izinkampani seziwile.
Lokhu kuzokwandisa abantu abantula imisebenzi nabadla imbuya ngothi.
Uphela nje unyaka odlule inani labantu abantula imisebenzi bese lenyukele kubantu abacishe babe wu-30 ekhulwini (30%). Izazi nabacubungula ngokusebenza kwezomnotho bathi ukuvalwa izinsuku eziwu-21 kwengxenye enkulu yomnotho obusuvele uzintengela, kuzokwandisa ubuphofu ezweni.
Lokhu kuzodalwa wukuthi usizo olumenyezelwe wuhulumeni luzoshiya ngaphandle ingxenye enkulu yezisebenzi.
Kuzokhumbuleka ukuthi ingxenye yalolu sizo izophuma esikhwameni se-UIF. Ongoti kwezomnotho bathi izisebenzi eziwu-45 kweziwu-100 kazikho ngaphansi kwalesi sikhwama.
Lokhu kusho ukuthi izisebenzi eziwu-8 million nemizi ewu-13
million ephila ngemiholo yalezi zisebenzi kayizukuhlomula kulolu sizo lwe-UIF.
Umbiko okhishwe nguNobhala we-UN, u-Antonio Guterres, uthe ngasekuqaleni kwaleli sonto, umhlaba wonke ubhekene nesimo esagcina ngempi yomhlaba yesibili.
Uthe abantu abaphakathi kuka-5 million no-25 million emhlabeni jikelele bangase balahlekelwe ngamathuba emisebenzi ngenxa yemiphumela yeCorona.
Lokhu kungenza izisebenzi zilahlekelwe yimiholo yazo ephakathi kuka-$860 million no-$3.4 billion.
Ngenxa yesimo esintengayo semali kahulumeni, ikakhulukazi ukwehla kwamandla akhe okweboleka imali kubatshali zimali, kuzokwenza kube nzima ukufukula umnotho.
Abanye ongoti bezomnotho bathi kayikho enye indlela uhulumeni anayo ngaphandle kokuyoboleka imali ezinhlanganweni ezifana ne-African Development Bank, okuyibhange lamazwe ase-Afrika, iNational Development Bank, okuyibhange lamazwe e-BRICS, neWorld Bank ne-IMF.
Kumakhomanisi, abezinyunyana nezinye izinhlangano zemiphakathi kungemukeleka ukweboleka kulezi ezinye izinhlangano, kodwa hhayi iWorld Bank ne-IMF.
I-World Bank ne-IMF banyamanambana kweminye imikhakha yezepolitiki ngenxa yemigomo enzima abayibekela amazwe aboleka imali kubo.
Noma ngabe iyiphi indlela uhulumeni ayikhethayo, izokwethwesa abampofu ubunzima ngesikhathi kwenziwa imizamo yokufukula umnotho.
* USikhakhane, oke wasebenza njengomkhulumeli kaNgqongqoshe wezezimali kanye nebhange lezwe, useyiphini lomhleli weConversation Africa. Lokhu akubhala lapha akuyona imibono yomqashi wakhe.
Previous articlele nto ye-lockdown izophela neminingi imishado
Next articleOshiye emaphoyiseni usenebhizinisi lokuhlanza